ESI AGBA ỌSỌ GAM AKPORO - A GAM AKPORO - 2019
Esi agba ọsọ gam akporo
Ịgba ume bụ otu n'ime ike ịchekwa ụdịdị na kọmputa na usoro Windows arụ ọrụ. Mana mgbe ụfọdụ, ịchọrọ ịhapụ ya, n'ihi na iji ọnọdụ a abụghị ihe ziri ezi mgbe niile. Ka anyị chọpụta otu esi eme nke a maka Windows 7.
Hụkwa: Otu esi gbanyụọ ọnọdụ ụra na Windows 7
Ụzọ iji gbanyụọ ọkụ
Ọnọdụ mkpuchi na-enye ike zuru ezu, ma ọ na-echekwa usoro nke usoro ahụ n'oge mmechi na faịlụ dị iche. Ya mere, mgbe a malitegharịrị usoro ahụ, akwụkwọ na mmemme niile na-emeghe n'otu ebe ebe ịbatara. Nke a dị mfe maka laptọọpụ, na maka PC ndị na-anọchi anya ka a na-achọ ịkwa ụra na-achọkarị. Ma ọbụna mgbe ọrụ a anaghị emetụta ma ọlị, site na ndabara, ihe hiberfil.sys ka na-etolite na mgbọrọgwụ ndekọ nke ụgbọala C, nke bụ ọrụ maka iweghachite usoro ahụ mgbe ị hapụchara mkpuchi. Ọ na-ewe ọtụtụ ohere na draịvụ ike (ọtụtụ mgbe, GB ole na ole), nhata olu na RAM ọrụ. N'ọnọdụ dị otú a, ọ ga-adị mkpa iji gbanyụọ usoro a ma wepụ hiberfil.sys.
N'ụzọ dị mwute, ịnwa ịmepụ faịlụ hiberfil.sys agaghị eweta ihe ndị a tụrụ anya ya. Usoro ahụ ga-egbochi omume iji zipụ ya na nkata. Mana ọbụlagodi na ọ ga-ekwe omume ihichapụ faịlụ a, a ga-emegharị ya ozugbo. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji wepu hiberfil.sys ma gbanyụọ mkpuchi.
Nzọụkwụ 1: Gbanyụọ mkpuchi akpaka
Enwere ike ịhazi mgbanwe na ọnọdụ nchịkwa na ntọala ma ọ bụrụ na arụghị ọrụ usoro maka oge ụfọdụ. N'okwu a, mgbe oge a kapịrị ọnụ, ma ọ bụrụ na emeghị ihe ọ bụla na kọmputa ahụ, ọ ga-abanye na steeti aha ahụ. Ka anyị hụ otú ị ga-esi gbanyụọ ọnọdụ a.
Họrọ "Ịtọ mgbanwe na ọnọdụ ụra".
A ga-enweta window nke anyị chọrọ na ụzọ ọzọ. Maka nke a, anyị na-etinye ngwá ọrụ ahụ n'ọrụ Gbaa ọsọ.
Kpọọ ngwá ọrụ akọwapụtara site na ịpị Nweta + R. Bụrụ na:
Nke a ga-agbanye na windo nhọrọ eletriki eletrik. Ejiri akara bọtịnụ redio na-arụ ọrụ ike ọrụ. Pịa aka nri ya "Ịmepụta Atụmatụ Ike".
Na window meghere maka ịtọlite ​​atụmatụ ike ugbu a, pịa "Gbanwee ntọala ikike dị elu".
A na-arụ ọrụ ngwaọrụ ndị ọzọ nke ike ọkụ eletrik nke atụmatụ a ugbu a. Pịa ihe "Ụra".
Na listi egosipụta nke ihe atọ, họrọ "Ịme mkpuchi mgbe".
A na-emeghe uru, ebe e gosipụtara ya, mgbe oge ole gachara mgbe mmalite nke arụmọrụ kọmputa, ọ ga-abanye na steeti. Pịa na uru a.
Mpaghara mepere "State (min.)". Iji gbanyụọ mkpuchi akpaka, tinye mpaghara a "0" ma ọ bụ pịa na akara ala ala atọ ruo mgbe egosipụta na uru na ubi "Ọ dịghị mgbe". Wee pịa "OK".
Ya mere, ikike nke ịbanye na nzuzo mgbe oge ụfọdụ nke arụmọrụ nke PC ga-enwe nkwarụ. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume iji aka gaa na steeti a site na menu "Malite". Na mgbakwunye, usoro a anaghị edozi nsogbu na ihe hiberfil.sys, nke na-aga n'ihu na ndekọ mgbọrọgwụ nke disk ahụ. C, na-enwe nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ohere disk. Otu esi ehichapụ faịlụ a, na-enyefe ohere ohere, anyị ga-ekwu na nkọwa nke usoro ndị a.
Usoro 2: akara iwu
Ị nwere ike iwepu mkpuchi site na ịpị iwu kpọmkwem na akara iwu ahụ. Ngwaọrụ a ga-agba ọsọ n'ihi onye nchịkwa.
Pịa "Malite". Na-esote, na-edebanye aha "Mmemme niile".
Chọọ maka nchekwa na listi. "Ụdị" ma banye n'ime ya.
Nchịkọta nke ngwa ntanetị mepee. Pịa aha "Iwu Iwu" bọtịnụ òké ziri ezi. Na ndepụta nke megharịrị, pịa "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Igodo windo akara iwu amalite.
Anyị kwesịrị ịbanye ebe ọ bụla n'ime okwu abụọ ahụ:
Powercfg / Hibernate anya
Ka ị ghara iji aka gị na-ebugharị okwu, detuo iwu ọ bụla dị n'elu site na saịtị ahụ. Wee pịa akara akara iwu na windo ya na akuku aka ekpe. Na menu nke meghere, gaa "Gbanwee"na na ndepụta ndị ọzọ họrọ Tapawa.
Mgbe etinyere okwu ahụ, pịa Tinye.
Mgbe arụmụka ahụ kwuru, enwere nkwarụ na nkwarụ, a na-ehichapụ ihe hiberfil.sys, nke na-enyefe ohere n'elu draịvụ ike kọmputa. Iji mee nke a, ekwesighi ịmalitegharịa PC ahụ.
Ihe omumu: Otu esi eme ka akara iwu na Windows 7
Usoro 3: Ndenye
Ụzọ ọzọ iji gbanyụọ mkpuchi mkpuchi gụnyere ịmepụta ndekọ ụlọ ọrụ. Tupu ịmalite arụmọrụ n'ime ya, anyị na-agba gị ume ka ịmepụta ebe dịghachi ma ọ bụ ndabere.
Nbanye na ndekọ Editor window na-eme site na itinye iwu na windo Gbaa ọsọ. Kpọọ ya site na ịpị Nweta + R. Tinye:
Malite nchịkọta akụkọ. N'iji window osisi n'akụkụ n'akụkụ windo ahụ, kpogharịa site na mpaghara ndị a: "HKEY_LOCAL_MACHINE", "Usoro", "CurrentControlSet", "Control".
Ọzọ, gaa na mpaghara "Ike".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọtụtụ nọmba ga-apụta na pane nri nke editọ ndekọ. Pịa ugboro abụọ pịa bọtịnụ aka ekpe (Paintwork) site na aha oke "HiberFileSizePercent". Nke a na-ekpebi nha hiberfil.sys dị ka pasent nke nha RAM.
Ngwaọrụ gbanwere oke HiberFileSizePercent. N'ọhịa "Uru" banye "0". Pịa "OK".
Pịa ugboro abụọ Paintwork site n'aha aha "HibernateEnabled".
Na igbe maka ịgbanwe mpaghara a n'ọhịa "Uru" banye "0" wee pịa "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-amalitegharịa kọmputa ahụ, n'ihi na tupu mgbanwe a agaghị arụ ọrụ.
Ya mere, site n'enyemaka nke nhazi na ndekọ ndekọ usoro, anyị na-edezi ụda faịlụ nke hiberfil.sys ka efu wee gbanyụọ ikike ịmalite ịbanye na mkpuchi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na Windows 7, ị nwere ike iwepu mgbanwe ntụgharị na ọnọdụ mkpuchi n'ọnọdụ nke PC ma ọ bụ kwụsị kpamkpam ọnọdụ a site na ihichapụ faịlụ hiberfil.sys. Ọrụ ikpeazụ nwere ike mezuo site na iji ụzọ abụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị kpebie ịhapụ kpam kpam kpamkpam, ọ ga-aka mma ime ihe site na iwu akara karịa site na ndekọ ndekọ usoro. Ọ dị mfe ma dịkwuo nchebe. Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​gaghị egbusi oge bara uru ị na-ebigharị kọmputa gị.